kwegazi Jikelele siqukethe izibonisi eziningana. Omunye wabo izinyathelo ESR ngokushesha kangakanani zamangqamuzana abomvu egazi uhlukane plasma futhi zibekwe ngamapayipi ukuhlolwa. Kuye izinga sedimentation, udokotela singakwazi ukubona ukuthi ingabe isiguli yisiphi isifo, kanye ukunquma ukushuba ukuthuthukiswa yayo.
ESR kubhekwa Inkomba evamile 2-10 mm / hr abesilisa 3-15 mm / h kwabesifazane. Njengoba erythrocyte ukuminyana idlula ukuminyana plasma, sebethule kwenzeka phansi tube. Kukholakala ukuthi lelisetulu erythrocyte adhesion bodwa, ayanda iphesenti acute isigaba amaprotheni ku-plasma.
Izizathu ukuthi wembulani sayinela ukungena anda igazi, kungenziwa emelelwa izinkomba ezilandelayo:
- ukwehla egazini albumin ;
- ukwandisa ivolumu alikhali egazini;
- Ukwehliswa abomvu egazi kwabantu;
Uma, kunalokho, kulolu cwaningo kutholakala ukuthi ESR ingezansi evamile, kungenzeka ukukhuluma mayelana ngeziphambeko ezinjalo, njenge:
- ukwanda albumin;
- kuncishiswe inani alikhali egazini;
- igazi viscosity kokweqa kuyinsakavukela;
- ushintsho ukuma yokwanda kwenani kwamangqamuzana egazi abomvu.
Uma ngesikhathi izifundo uthole kakhudlwana soy igazi, lokho kungase kubonise ukuthi ukuthuthukiswa izifo ezifana ukuvuvukala umgudu wokuphefumula, ubuthi acute, isifo senhliziyo, ngisho nezimila ebulalayo. Uma isifo oncological iqhubeka, isoya izinga inyuka ngempela ngokushesha bese uba elilingana 60 mm / ihora noma ngaphezulu.
High soy igazi akufanele okwesabisa ngemva ukungenelela odlule kuhlinzwa, ngesikhathi sokukhulelwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ezingeni evamile ukusebenza inkinobho yomcibisholo wokuphenya egazini zincike engu-isiguli. Ngakho-ke, asikho isidingo ukuqhathanisa ukuhlaziywa igazi lomuntu omdala futhi ingane.
Ukuze uthathe ukuhlolwa igazi futhi ukuthola ukwaziswa okunokwethenjelwa mayelana nokwakheka kwe-igazi nokuthi soy anda umthamo wegazi lesiguli noma cha, kumelwe ulungiselele. Ukuhlolwa kwegazi esithathwayo ekuseni, yidlani ukudla kwenu kwasekuseni ngaphambi kokuthatha nagazi akunakulidla, ngaphezu kwalokho, lapho isidlo sokugcina kufanele uthathe okungenani amahora angu-8, ngoba zinguquko zikhonjiswe imiphumela yokuhlolwa ibonisa isimo umzimba iyonke.
Omama abaningi abaye bathola imiphumela ukuhlaziywa igazi ingane yabo, bakhathazekile ngesimo, kungakhathaliseki evamile sedimentation izinga kwamangqamuzana egazi abomvu? Cabanga kulokho izimo kudingeka ngempilo womntwana, futhi lapho ESR kuyinto evamile.
igazi soy ezinganeni ezineminyaka ephakathi kuka-izinyanga 1 inyanga ukuba eziyisithupha kufanele ibekwe uhla 2 kuya ku-6 mm / h, kanti ukwanda kwaleli lungiselelo uya kanye esakhula kid. Ngaphezu kwalokho, ingane ize 1 unyaka ejwayelekile Inkomba zokhahlamba kusuka 4 kuya ku-7 mm / ihora. Kancane kancane, lesi sibalo liyakhula, ngokuvumelana nokuvuthwa wengane futhi oneminyaka engaphansi kwengu-8 nengu-16 e amazinga egazi soy kungenzeka 8-12 mm / ihora.
Kuleso simo, uma ingane yakho ekuphakamisile igazi kabhontshisi kusuka amayunithi 10 ephakeme kunaleyo evamile, udinga ukubona udokotela, ngoba izinga ezifana isivinini izinkulumo mayelana nokuthuthukiswa isifo. Uma izinga ka ESR kunyuke ngo amayunithi 40 noma ngaphezulu, udinga ikhale alamu, ngoba lesi sibalo sikhombisa ukuthi ingane nezibi, futhi ukuvuvukala ezingase zisongele ukuphila kwakhe.
Yiqiniso, akufanele, njengomuntu omdala futhi ingane, fanatically kwegazi njalo ngesonto futhi nizibhale zonke izinkomba kumiphumela, ikakhulukazi uma unomuzwa enhle.
Okokuqala, ukulalela wena, ukuze umzimba wakho. Kuphela uma you fanele phi khonondo, nginikeze cwaningo. Lokho Udokotela udinga ukuthola izizathu ukwanda noma ukwehla okuletha kukhompiyutha Inkomba egazini futhi zibeka ukwelashwa kusenesikhathi. Musa bathathe izinqumo ezinjalo ukuqeda lesi sifo bebodwa, ngoba ngemva kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane, kokuba imithi oyinikiwe, ungakwazi ukuqeda ukwesaba elihlobene ne-usongo empilweni yakho.
I meniscus we ngokuhlanganyela amadolo
Ake sibheke Ukuvuleka komlomo - esiyingozi zokugula?
Ngiyithola kanjani nesondlo 2011
Scooter Honda Isu lokungacunuli 30: ekuhlaziyeni
Selfie yokudlela ( "Selfies"), eMoscow: ikheli, imenyu, ukubuyekezwa
"Blue Mist" (violet): incazelo, ukunakekelwa, isithombe
Umnyango buxhomeke "Butterfly": amathiphu ukufakwa
Izitsha esilula imfundamakhwela abapheki: tortilla kuso. Indlela e ukuhlukahluka eziningana
French iwayini "Chablis": ngezigaba. Indlela ukukhetha okungcono iwayini French
Russian State Social University (RSSU). Izibuyekezo